[ March 30, 2020 ] ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလို့ ပရိသတ်တွေကို အသိပေးလိုက်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်	CELEBRITIES
[ March 30, 2020 ] အားကစား လုပ်စဉ် ရုတ်တရက် သေဆုံးခြင်း.. လူတိုင်း သိထားသင့်တယ်	HEALTH
ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလို့ ပရိသတ်တွေကို အသိပေးလိုက်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
March 30, 2020 Alinn Pya 0
Photo by Thin Zar Wint Kyaw Photo by Thin Zar Wint Kyaw Photo by Thin Zar Wint Kyaw Photo by Thin Zar Wint Kyaw Photo by Thin Zar Wint Kyaw
ယာဉ်မတော်တဆမှုဖြစ်ရာက သူမတို့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေကို ပရိသတ်ကို အသိပေးလာခဲ့တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
March 27, 2020 Alinn Pya 0
သု သုတို့ကိုသတင်းကြားလို့စိတ်ပူပြီးဖုန်းဆက်မေးကြသူများရှိသလို တချိူ့ကလည်းပျောက်နေတာကြာလို့ မေးနေကြသူမိတ်ဆွေများလည်းရှိတာမို့ စိတ်မပူကြဖို့အတွက် အခုfacebook ကနေအသိပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်….အ ခုဖြစ်နေတဲ့ COVID 19 ကြောင့် ကိုဏကြီးရိုက်ကူးလက်စဖြစ်တဲ့ “ချစ်ခင်စမှော်ရုံ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရိုက်ကူးမှုကိုရပ်နားပြီးပြန်လာတဲ့ လမ်းမှာသုသုတို့ယာဉ်မတော်တဆမှုဖြစ်ပါတယ်…. ကံ ကောင်းထောက်မစွာနဲ့ အရှေ့ခန်းမှာထိုင်တဲ့သုသုမန်နေဂျာနဲ့ ကားဆရာတို့ Air bagပွင့်သွားတာကြောင့်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး….အနောက်ခန်းမှာထိုင်တဲ့ ကိုဏကြီးနဲ့သုသုကတော့ အနည်းငယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရကြပါတယ်( စိုးရိမ်စရာမရှိပါ) မျက်နှာဖူးယောင်ပွန်းပဲ့ရုံ ခြေလက်အနည်းငယ်ထိခိုက်မိရုံပါ(အရိုးကျိုးတဲ့အထိမဖြစ်ပါ)…. ပြဿနာဖြစ်ချိန်မှာဒဏ်ရာတွေနဲ့‌သုသုတို့နှစ်ယောက်ကိုဆေးရုံပို့စစ်ဆေးပေးကြတဲ့မသီတာနဲ့မမီးကားကိစ္စတွေရဲစခန်းမှာလိုက်ရှင်းပေးကြရုံသာမကအိမ်အထိလင်မယားနှစ်ယောက်ကိုလိုက်ပို့ပေးတဲ့ ဒေါင်းနဲ့ ကိုသားညီတို့ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်…ကျိုးပဲ့ခြင်းမရှိတဲ့အတွက် အခုလိုအချိန်မှာဆေးရုံမတက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးအိမ်မှာသာ ဆေးသောက်အနားယူနေကြပါတယ်….ချစ်သောမိတ်ဆွေများနဲ့ ခုနစ်ရက်သားသမီးများလည်းဘေးကင်းကျန်းမာကြပါစေ….တတ်နိုင်သမျှ အိမ်မှာနေကြပါ…. မတတ်သာလို့ အပြင်ထွက်အလုပ်လုပ်နေရသူများလည်း […]
ရွှေကြို ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့ သူတွေက ဂရုမစိုက်တဲ့ ပုံစံမျိူးနဲ့ နေခဲ့လို့ မျက်ရည်ကျခဲ့ရတဲ့ အိန္ဒြာမိုးမြင့်
ရွှေကြိုပြိုင်ပွဲရဲ့ နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုတော့ ယမန်နေ့ညက ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်အားပေးမှုရခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင် အိန္ဒြာမိုးမြင့် ကတော့ ပါဝင်လာခဲ့ ခြင်းမရှိခဲ့တာပါရွှေကြိုမယ်တစ်ယောက် ဖြစ်ခွင့်မရတော့လို့…စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူတွေ အများကြီးရှိတာ သိရလို့ ပျော်မိတယ်…ပရိသတ်တွေရင်ထဲက People’s Choice Award ဆုကို ရလိုက်သလိုပဲခံစားရပါတယ်…လို့ ရွှေကြိုပြိုင်ပွဲဝင် အိန္ဒြာမိုးမြင့် က ရင်ဖွင့်လာခဲ့တာပါ သူမနဲ့ အင်တာဗျူးလေးကို ပရိသတိကြီးအတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်Credit Cele Gabar, From ေန႔စဥ္သတင္းႏွင့္သုတရသအျဖာျဖာ ေရႊႀကိဳ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရတဲ့ သူေတြက […]
သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်က ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးလှိုင်သာယာမှာ COVID-19 ထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာ အသုံးပြုဖို့အတွက် လှိုင်သာယာအခမဲ့ ဆေးဝါးဖောင်းဒေးရှင်းက တဆင့် ၃ လွှာပါ ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး မျက်နှာဖုံးနှာခေါင်းစည်း ၁၀၀၀၀ ဒီကနေ့ လာရောက်လှူဒါန်း သွားပါတယ်။ Photo Credit- Myatmin Thu / DVB TV News From D Nae Khit Media စိုင္းစိုင္းခမ္းလွိုင္က လွိုင္သာယာျပည္သူ႔ေဆး႐ုံအတြက္ ႏွာေခါင္းစည္း ၁၀၀၀၀ […]
အားကစား လုပ်စဉ် ရုတ်တရက် သေဆုံးခြင်း.. လူတိုင်း သိထားသင့်တယ်
အသက် ၃၅ အောက် အားကစား သမားများ ယှဉ်ပြိုင် ကစားစဉ် သေဆုံးစေသော အကြောင်းရင်းများ- ၁) HOCM မွေးရာပါ နှလုံးကြွက်သား ထူသောရောဂါ (၃၅ %) ရုတ်တရက် အားကစား လုပ်စဉ် မသေဆုံးမီ ၉၆ % သောလူနာများ ၏ ECG တွင် ရောဂါ တွေ့ရှိနိုင်သည်။ Population screening ခေါ် အားကစားသမားများ အားလုံး ဆေးစစ်ပါက ECG […]